အမှတ်ရစရာ EBI 11 နှစ်မြောက်အခမ်းအနား
ငါတို့ရဲ့ပွဲကို Nanchang Boli ဟိုတယ်မှာကျင်းပခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါတီမှာတရုတ်နိုင်ငံမှာလူမီနီယံဘူးတွေအတွက်အကောင်းဆုံးပေးသွင်းသူအားလုံးကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ F ...
21-04-25 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
ပြီလကတကယ်ကိုအထူးလ။ တင်းမာနေတဲ့“ March Expro” ဟာပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်စွမ်းဆောင်ရည်ရည်မှန်းချက်များကို ကြိုတင်၍ ရရှိရန်အတွက် ၀ မ်းမြောက်စွာခံနေရဆဲဖြစ်သည်။ EBI ၏ ၁၁ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့သည်တိတ်ဆိတ်စွာရောက်ရှိလာပြီးအခမ်းအနားလည်းရောက်သည်။ တရားဝင်ဖွင့်ပွဲအတွက်နောက်ဆုံးနှစ်ရက်သာကျန်တော့သည်။ အားလုံး ...
2021, အသစ်တစ်ခုကို Start!
2020 အလွန်မြန်ဆန်စွာသွားပါပြီ ရုတ်တရက်ကူးစက်ပျံ့နှံ့ခြင်း၊ လေ့လာခြင်း၊ အလုပ်နှင့်ဘဝပြတ်တောက်ခြင်းများ ... အချိန်သည်ဖိသိပ်နေပုံရသည်၊ အချိန်မရသေးပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်နှုတ်ဆက်ရန်အလျင်အမြန်သွားမည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှာနှုတ်ဆက်ပါ ၂၀၂၀ မှာလေကိုတိုက်နေပြီ။ ကျနော်တို့ကြိုးစားခဲ့! ငါတို့စပါးရိတ်စရာများစွာရှိ၏။
EBI ပါတီမှကြိုဆိုပါ၏ Christmas ခရစ်စမတ်ပွဲကျင်းပရန်။ ခရစ္စမတ်ပွဲကျင်းပခြင်းသည် EBI တွင်အစဉ်အလာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ဤပွဲတော်ကိုအလွန်နှစ်သက်ကြသည်။ ဒါဟာငါတို့အတူတကွကျင်းပခဲ့တဲ့ ၁၁ ကြိမ်မြောက်ခရစ်စမတ်ပဲ။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူမျှဝေချင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခရစ်စမတ်သစ်ပင်သည်အလွန်လှပသည်။ သစ်ပင်ဝန်ထမ်းများနှင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။
ဒီနှစ်မှာရောင်းအားကဘယ်လောက်လဲ။ - ကျွန်ုပ်တို့သည် RMB ၁၀၀ မီလီယံရရှိခဲ့သည်။
EBI အတွက်သမိုင်းဝင်အခိုက်အတန့်ဖြစ်သော ၂၀၂၀၊ ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်တွင်! ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာ RMB သန်း ၁၀၀ ထက်ကျော်လွန်နေပါတယ်။ EBI လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကယ့်ကိုကြိုးစားအလုပ်လုပ်ကြသည် !! ကပ်ရောဂါ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအရကျွန်ုပ်တို့သည်လမ်းညွှန်ချက်ချင်းပြောင်းလဲခြင်း the မဟာဗျူဟာကိုပြောင်းလဲခြင်း， ထိုအချက်ကို ...
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ဘယ်လိုပြောပါသလဲ EBI မှရရှိသောကောင်းမွန်သောအထောက်အပံ့များနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များထံမှချီးမွမ်းစာများစွာကိုရရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်အားလုံးအတွက်အစေခံရန်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အလွန်ဂုဏ်ယူပါသည်။ ဤစာပါအကြောင်းအရာများကိုမင်းနှင့်မျှဝေလိုပါသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးအောက်ပါစာကိုဖတ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်ထုံးစံတစ်ခုမှာ ...
EBI သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ပြီးနောက်ပိုင်းအထွေထွေမန်နေဂျာနှင့်အခြားမန်နေဂျာများ၏ ဦး ဆောင်မှုနှင့်အခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ပူးတွဲကြိုးပမ်းမှုများအရလွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်အတွင်းထူးခြားသောအောင်မြင်မှုများရရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေများကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖော်ပြရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အချိန်ကိုမှတ်မိရန်။
သင်တံဆိပ်ဒီဇိုင်းကိုကူညီနိုင်ပါသလား? - ဟုတ်သည်၊ ထုပ်ပိုးခြင်းထက်ပိုပါသည်
EBI နည်းပညာဒီဇိုင်းပညာရှင်အဖွဲ့သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၉ ရက်မှစ၍ တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရာနှင့်ချီသောဖောက်သည်များ၏လိုဂိုနှင့်ဒီဇိုင်းကိုကူညီသည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာအဖွဲ့ ၀ င်များ - အဖွဲ့ ၀ င်များ - ကျွမ်းကျင်သောအဖွဲ့သည်သင်၏လုပ်ငန်းအတွက်ခိုင်မာသောအထောက်အပံ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဖြစ်ရပ်မှန်ပြ - ကျွန်ုပ်တို့အရင်ဒီဇိုင်းနှင့်ပုံသဏ္designာန်။ မင်းကိုဘယ်လိုရလဲ
စက်တင်ဘာဝယ်ယူရေးပွဲတော်သည်နိုင်ငံခြားကုန်သည်များလက်လွတ်မသွားနိုင်သောပွဲတော်ဖြစ်ပြီး EBI သည်လုံးဝမရှိတော့ပါ လှပသော Lushan တွင် EBI သည်စက်တင်ဘာလ ၀ ယ်ယူပွဲတော်တိုးချဲ့မှုနှင့် PK စတင်သည့်အစည်းအဝေးကိုစတင်ခဲ့သည်။ လူတိုင်းကိုချဲ့ထွင်ရန်သာယာသောတိုးချဲ့လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သည်။
EBI ရှိဆရာများ၏ယဉ်ကျေးမှု - ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့ကိုဤနည်းဖြင့်မြှင့်တင်သည်
အဆိုပါလမ်းညွှန်စနစ်တရုတ်အတွက်ရှည်လျားသောသမိုင်းရှိပါတယ်။ ၎င်းသည်ကျောင်းသားများအားကျောင်းသားများအားလေ့လာမှု၊ အလုပ်လုပ်ရန်နှင့်နေထိုင်ရန် ဦး ဆောင်သည့်အခြေအနေသည်ကျောင်းသားများပိုမိုကောင်းမွန်မြန်ဆန်စွာနှင့်သူတို့၏အလုပ်ထဲသို့ပေါင်းစည်းနိုင်စေရန်ဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့်ရိုးရာတရုတ်နည်းပြစနစ်ကိုအယူအဆနှစ်ခုအဖြစ်ခွဲထားသည်။ ပထမတစ်ခုမှာမာစတာဖြစ်သည်။
20-03-27 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့နေသည့်အချိန်များတွင်ပacterိဇီဝဆေးများကိုသန့်ရှင်းစေသောဆေးများအသုံးပြုခြင်းသည်အထူးအရေးကြီးသည်။ လူတိုင်းအချိန်ကိုသက်သာစေပြီးပိုးသတ်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရေနှင့်ဆေးရန်မလိုပါ။ သို့သော်လက်ဖြင့်အညစ်အကြေးစွန့်ဆေးမှုနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခြင်း၏မှားယွင်းသောနည်းလမ်းသည်ထိခိုက်မှုကိုမဖယ်ရှားနိုင်ပါ။
တစ်လခန့်အိမ်တွင်းသီးခြားနေထိုင်ပြီးနောက် ၂၀၂၀၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ တွင် EBI ၀ န်ထမ်းအားလုံးသည်ကုမ္ပဏီသို့လုံခြုံစွာရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရုံးကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါကုမ္ပဏီကလူတိုင်းအတွက်အထူးဖြစ်ရပ်နှစ်ခုကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်။ ပထမဆုံးကတော့အစားအစာဝေမျှခြင်းပဲ။ EBI ၀ န်ထမ်းတိုင်းသည်သူအကြိုက်ဆုံးအစားအစာများကိုလူတိုင်းနှင့်မျှဝေရန်ယူလာသည်။ အီးပြီးနောက် ...